के विश्वकर्मा पूजा मनाउनुमा भारतीयको प्रभाव छ ? | Kendrabindu Nepal Online News
के विश्वकर्मा पूजा मनाउनुमा भारतीयको प्रभाव छ ?
१ आश्विन २०७६, बुधबार १५:४८
हरेक चाडपर्वको आआफ्नै महत्व र विशेषता हुन्छ । हरेक पर्व मनाउनुको पछाडि त्यसको धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कारण हुन्छन् । वैज्ञानिक कारण हुन्छन् ।
आज विश्वकर्मा पूजा । विश्वकर्मा पूजा भन्नासाथ हामी विभिन्न कलकारखाना, पार्टपूर्जा, यन्त्रको पूजाआजा गर्छौं । आखिर किन यसो गरिएको होला ?
हरेक वर्ष कन्या संक्रान्तिको दिनमा अर्थात असोज १ गते विश्वकर्मा पूजा गरिन्छ । भनाइअनुसार यो दिन विश्वकर्माको जन्म भएको थियो यसैले यस दिनलाई विश्वकर्मा जयन्ती पनि भनिन्छ ।
नेपाल र भारतमा विश्वकर्मा पूजा उल्लासपूर्ण तरिकाले मनाइन्छ । यसैले विश्वकर्मा पूजाको दिन उद्योग, कलकारखाना र हरेक किसिमका मेसिनहरूको पूजाआजा गरिन्छ । यो पूजा सबै कलाकार, शिल्पकार र औद्योगिक घराना, व्यापारी र मजदुरहरूले गर्छन् ।
खासमा यो पूजा केही दशकअघिसम्म नेपालमा त्यति धेरै प्रचलित थिएन । नेपालमा यो यहाँ कार्यरत भारतीयहरूकै कारण झांगिएको हो । अहिले पनि यो पूजा भारतीयहरूले जति धूमधामका साथ गर्छन् त्यति नेपालीहरूले गर्दैनन् । तर पनि देखासिकीमा यो पूजा गर्ने प्रचलनले व्यापकता पाएको छ ।
यो दिन धेरैजसो कलकारखाना बन्द रहन्छ र मानिसहरूले हर्षोल्लासको साथमा भगवान विश्वकर्माको पूजा गर्छन् ।
विश्वकर्मा को हुन् ?
एउटा भनाइअनुसार भगवान महादेवले ब्रह्मा र विष्णुलाई सृष्टिको सृजना र पालनको भिन्नभिन्नै जिम्मेवारी दिएका थिए । सृष्टिको सृजना गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न ब्रह्माले आफ्नो वंशज देवशिल्पी विश्वकर्मालाई आदेश दिए ।
विश्वकर्मालाई विश्वकै सबैभन्दा पहिलो इन्जिनियर र वास्तुकार पनि मानिन्छ । उनले पाताल, मर्त्यलोक र स्वर्गलोक गरी तीनै लोकको निर्माण गरे ।
भगवान विश्वकर्माको महत्व यो कुराले पनि स्मरण सकिन्छ कि उनको महत्वको वर्णन ऋग्वेदमा ११ ऋचाहरू लेखेर गरिएको छ ।
उनको अनन्त र अनुपम कृतिमा सत्ययुगमा स्वर्गलोक, त्रेतायुगमा लंका, द्वापयुगमा द्वारिका र कलियुगमा जगन्नाथ मन्दिरको विशाल मूर्ति आदि रहेका छन् ।
जसको सम्पूर्ण सृष्टि र कर्म व्यापार हो उनीहरू विश्वकर्मा हुन् । सजिलो भाषामा भन्ने हो भने सम्पूर्ण सृष्टिमा जुन पनि कर्म सृजनात्मक हो जुन कामले जीवको जीवन सञ्चालित हुन्छ । उनीहरू सबैको मूल विश्वकर्मा हो । त्यसैले उनको पूजनले प्रत्येक व्यक्तिलाई प्राकृतिक ऊर्जा दिन्छ र काममा आउने सबै बाधा अड्चनहरूलाई तोडिदिन्छ भन्ने विश्वास छ ।
Prevबिहीबारदेखि मौसममा सुधार हुने
प्रचण्ड अस्पताल पुगे, एउटा दाँत निकाल्नुपर्नेNext